ISilo Misuzulu – The Ulwazi Programme
Ngomhlaka 01 Novemba 2021 kuvotelwa ohulumeni basekhaya. Ukuvota lokhu kusho ukuthi amaqembu kumele aphume abhukule njengamaphisi eya enqineni ukunxenxa abantu kanye nemphakathi ukuthi bavotele amaqembu awo. Kulokhu ke kwenzeke okungajwayelekile kakhulu ngenkathi iqembu le-Inkatha Freedom Party lisebenzisa indlunkulu yakwaZulu ukunxenxa abantu ukuthi bavotele iqembu okhethweni lwakusasa. Kube nezikhalo ezinkulu kanye nokuhlukana kwemibono kubantu besizwe samaZulu … Read more
Kuyinsila kaZulu noma nje wesizwe sikaPhunga ukuthi Amakhosi abe nezibongo zawo, ukuba nezibongo zawo akusho ukuthi kukhethwa iphela emasini kugcina ngawo kuphela kepha ngisho izinsizwa nje ziyaba nezibongo ngobunsizwa bazo. Lapha ke sithi ake sithi qephu qephu ngezibongo zenkosi yakwaZulu esanda kuhlala esihlalweni sobukhosi uMisuzulu. Zime kanje ke izibongo zikaBayede… Uvete oyisinana ogxuma wahlala esihlalweni … Read more
Categories People Tags ISilo Misuzulu